Indray mandeha Walt Disney: ny fitaoman'ilay Jeneraly Lehibe | Famoronana an-tserasera
Indray mandeha Walt Disney: ny fitaoman'ilay Jeneraly Lehibe
Izy dia mpamokatra, talen-tsoratra, mpanoratra horonantsary ary mpanentana ary mazava ho azy, ny niandohan'ny tantaran'ny sinema mihetsika ho an'ny ankizy. Walt Disney no lasa sary famantarana ny indostrian'ny fialamboly noho ny fandraisany anjara lehibe tamin'ny olombelona tamin'ny kanto sy ny fifandraisana. Azo antoka fa maro aminareo no mpitia mahatoky ny asany, ka nanapa-kevitra ny hizara aminareo fanadihadiana kely sy famerenana ilay Andriamanitra mandrakizay momba ny sarimiaina aho.
Na dia maty izy tamin'ny fahatanorany (65 taona) noho ny homamiadan'ny havokavoka, dia nahavita nandray anjara tamin'ny fanovana ny fomba fahazoana ny fialamboly, ny majika ary ny fitantarana ny tantara izy nandritra ny androm-piainany. Hatramin'ny fahazazany dia nifanerasera tamin'i Roy rahalahiny izy mba hamorona studio kely izay ho tonga avy eo ny orinasa manandanja indrindra manankarena indrindra manerantany androany miaraka amina anjaran'ny miliara dolara an'arivony tapitrisa isan-taona.
Ilay mpanao sariitatra maotina nanokana ny fotoanany hamoronana angano dia nanana faniriana ho talen'ny sarimihetsika ary na dia teo aza ny fiodinan'i Hollywood azy dia nanangana empira sarimihetsika izy. Izy no solontena tsy azo iadian-kevitra amin'ny fanatontoloana ny sarimihetsika mihetsika. Walt Disney dia teraka tany Chicago tamin'ny taona 1901. Nanomboka tamin'ny fahazazany dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny tantara notantarain'ny reniny azy izy ary tamin'ny faha-enina ambin'ny folo taona dia te-hifindra monina tany Eropa izy, izay potiky ny ady tamin'izany. Ny fahitany ny kaontinanta eropeana dia nanery azy hijanona amin'ny fihetsiny tsy tapaka ary rehefa niverina tany Amerika izy nanapa-kevitra ny hamorona ny orinasany voalohany miaraka amin'ny rahalahiny Roy. Nanao dokambarotra tamin'ny endrika sarimihetsika kely misy sary mihetsika izy ireo ary tsy ela dia tonga ny fitsapana voalohany. Namorona teknika vaovao izy, natambatra fironana sary, haisoratra ary sinematografika, ary nasehony ny talentany tsy azo lavina. Ary nanomboka tamin'ny totozy daholo izany.
Nanjary fahombiazana iraisam-pirenena i Mickey, na dia resy lahatra aza i Disney fa tsy tokony halazo ilay nofinofy aorian'ny minitra vitsy. Ny ankamaroan'ireo sarimihetsika manasongadina azy dia manana loharano ao amin'ny tranomboky eoropeanina. Bambi dia mifototra amin'ny tantaran'i Feliz Salten izay noraran'ny Nazisma ny bokiny, Snow White dia an'ny Brothers Grimm, Pinocchio avy amin'ny Collodi Italiana, Alice in Wonderland avy amin'ilay anglisy anglisy, Lewis Carroll.
Ny iray amin'ny tsiambaratelon'i Walt Disney dia ny manodidina ny mpanakanto manana kolontsaina, fiaianana manokana ary akademika. Walt Disney dia tsy nanana fotoana nianarana, tsy teraka tamina fianakaviana manankarena izy, fa tao anaty fianakaviana iray izay tsy maintsy niasa mafy. Izy tenany dia tsy maintsy niasa hatramin'ny fahazazany ary izany no nahatonga azy tsy natoky ny kolontsaina amin'ny ankapobeny, natahotra izy sao ho avara-pianarana noho izy te-hanatratra olona betsaka indrindra nefa niaraka tamin'izay dia nahatsapa ho nahaliana azy avo ny kolontsaina. Noho ny fahatsapany ny fetran'ny fahalalany dia nanakarama ny ankamaroan'ny mpanakanto eropeana farafaharatsiny tany am-piandohana, toa ireo mpanao sariitatra niara-niasa taminy tamin'ny sarimihetsika voalohany. Mpanakanto nifindra monina avy tany Eropa nankany Etazonia izy ireo. Disney dia nanome azy ireo asa ary mety nahita tao amin'ireo mpanao sariitatra tsirairay ireo ny fiaviana ara-kolotsaina nofahanan'izy ireo ary azony fa azony ampiasaina amin'ny sarimihetsika ilay sary an-tsary nofehezin'izy ireo ary tsy fantany tsara izany.
Snow White sy ny Seven Dwarfs dia tsy ny horonantsary endri-javatra voalohany mihetsika amin'ny tantaran'ny sarimihetsika, sangan'asa miaraka amina seho mahatalanjona entanin'ny horonantsary mampatahotra sy mampiahiahy lehibe.
Nihevitra i Disney fa rehefa tena mahomby ny sarimihetsika dia mila manokana sarimihetsika fohy mihetsika ho azy ianao. Rehefa navotsotra ny Mpanjaka Kong dia nieritreritra ho azy ny hanao sary azy. Ny tena King Kong dia saribakoly valopolo sentimetatra ary noheverin'i Walt Disney ny hampiditra azy io amin'ny asany «Ny fivarotana biby«. Dingana iray aloha hatrany, na dia nentanin'ny aingam-panahy tamin'ny androny aza izy io, nivoaka teny amin'ny arabe ireo mpanao sary, talen'ny teknisiana ary nandeha tany amin'ny teatra, fampiratiana, sinema, ary nisy efitrano fandraisam-bahiny mihitsy aza toa an'i Frankenstein izay hanome aingam-panahy ny The Mad Doctor. Ny animator tsirairay dia samy nanome ny faran'ny fasika ho an'ny fananganana ny trano, amin'ny fananganana ny hatsarana Disney.
Tany amin'ny taona XNUMX, sarimihetsika toa ny Ny kabinetran'ny Dr. Caligari izay nilalaovana ny habakabaka mba hamoronana rivo-piainana misolo tena sy misolo tena ny Expressionisme alemanina. Hitanay ny fitaomana mazava an'io fironana sarimihetsika sarimihetsika io ao amin'ny Disney toy ny Pinocchio na Fantasia.
Disney dia niraikitra tamin'ny eropeanina ny angano sy ny angano, fa koa amin'ny tena Eropa izay nandeha lamasinina matetika. Tsy misy fetra ny fahalalany te hahafanta-javatra. Ny fahitana azy dia mampifangaro tsangambaton'ny mpanjaka, sary an-tsehatra, seho an-tanindrazana, maritrano romantika, katedraly manaitra ary trano bongo maotina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Indray mandeha Walt Disney: ny fitaoman'ilay Jeneraly Lehibe